Creative Writing » ဘယ် ညာ Left Right	42
(ဘယ်သန်များအတွက်မပါ) အဲဒီကတဆင့်တက်လို့ “လက်ဝဲ” “လက်ယာ” ရယ်လို့ သင်ကြားရတဲ့အခါ အလွယ်တကူဖြစ်အောင်
Left Right Left Right လို့ အော်တာနဲ့ တွဲမှတ်ထားရတယ်။ ခုရက်ထဲမှာ ဘယ်က၀င်လာမှန်းမသိတဲ့ ကြံကြံဖန်ဖန် အတွေးတစ်ခုက……
kai says: ကြံကြံဖန်ဖန်နော… အံ့ဖွယ်…။
နောက်တာ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: Cheese ကို ဘာမှန်းမသိခဲ့၊
စားရင်ပဲ အမျိုးဖျက်သစ္စာဖောက် ဖြစ်မလောက်ထင်ခဲ့တဲ့ မဆလခေတ်ကို သတိရမိသွားပြီ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14459
kai says: မဆလခေတ်က… ပဒုမ္မာတို့.. မေတ္တာမွန်တို့မှာ.. Cheese တွေ… ထောပတ်တွေ.. တင်ရောင်းပါတယ်..။
ဘုန်းဘုန်းကြီးတွေက.. အလကား..စား.. အဲ.. အဲ.. ဘုန်းပေးရတာ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: အဲ့ချိန်က စကော့ဈေး ထဲ မလဲ မှောင်ခို ချိစ် တွေ ရနိုင်ပါတယ် မဟုတ်လား။
ခင်ဇော် says: ဒီ ပို့(စ) ဖတ်ပြီး ရထားပေါ်မှာ တလမ်းလုံး စဉ်းစားလာတာ။
မြစပဲရိုး says: အလိုလေး။ ဒါမျိုး တစ်ခါ မှ မတွေးဖူးဘူး။
Ma Ma says: (ဒါမျိုး တစ်ခါ မှ မတွေးဖူးဘူး။)
ဦးဏှောက်က အဲလိုဆို။ (၃၆၅ ပြည့် ဖို့ အတွက် ပြန်စဖို့ မစဉ်းစား သေးဘူးလား။)
သတိရတဲ့သူ မရှိတော့ဘူး အောက်မေ့လို့ ရေသာချိုအချောင်လိုက်မလားလို့ စဉ်းစားနေတာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1294
uncle gyi says: ဆံပင်ဖြူလို့ဆေးဆိုးနေရတာ
Ma Ma says: ဆောရီးပါ အန်ကယ်ကြီးရေ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 803
ကြွေလွင့် ပန်း says: တစ်ကယ်တန်း စစ်ရေးပြတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်၊ စစ်ရေးပြမှာ Commander အဖြစ်နဲ့ ပြရတာဖြစ်ဖြစ် အခြေခံအားဖြင့်တော့ ဘယ်ညာနဲ့ စတာပေါ့။ အဲ့ဒီမှာ တစ်ခါတုန်းက ငါတို့ကို ဘယ်ကနေစခိုင်းတာ ညာဘက်ကနေစတော့ ဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့ ညာဘက်နဲ့ ခြေလှမ်းတော့ လက်ကပါ ညာဘက်ကြီးကို ပြနေတော့ ညာညာ ဘယ်ဘယ် ဖြစ်နေတာလဲ ကြုံဖူးတယ်။ ဒီမှာ ဘာတစ်ခု သဘောပေါက်သွားလဲဆိုတော့ ကိုယ်ခန္ဒာကြီးက ခြေနဲ့ လက်ဆို လက်ကို ပိုဦးစားပေးတယ်လို့ သိလိုက်သဗျ။ (ပြောရမယ်ဆို.. ခြေထောက်က လမ်းလျှောက်တာနဲ့ ဘောလုံးကန်တာပဲ ရတာ။ လက်ကသာ အကုန်လုပ်ရတာကိုး)
Ma Ma says: ကိုယ်ခန္ဒာကြီးက ခြေနဲ့ လက်ဆို လက်ကို ပိုဦးစားပေးတယ်လို့ ဆိုတာကို သတိမထားမိဘူး။ က တဲ့အခါ ဘယ်ခြေညာလက်၊ ညာခြေဘယ်လက် လို့ဆိုထားတော့ ခြေကို ဦးစားပေးတယ်လို့ ပြောလို့ရမလားးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ဘယ်ညာ ဘယ်ညာ ဘယ်ညာ ဘယ့်……………….။ ဘယ်ရောညာရော သန်တာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ပို့စ်လေးကိုတွေးသွားတယ်။ Believe ရဲ့ အလယ်မှာတောင် Lie ဆိုတာ ပါနေသေးတာပဲလေ။
Ma Ma says: အောင်မိုးသူလည်း ဥာဏ်ကျယ်လေးပဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .တကယ်အော်တော့…ဘိန်ညာ..ဘိန်ညာ..ဘိန်ညာ..ဘိန်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .Leg လက်=ခြေထောက်
Ma Ma says: အထက်တန်းကျောင်းတုန်းက စစ်ရေးပြလမ်းလျှောက်ထွက်တုန်းကတော့ ဦးမိုက်ပြောသလို…
ဆရာအော်သံကို ဘိန် ညာ ဘိန် ညာ ဘိန် ညာ ဘိန်းးးးး လို့ ကြားမိတာပဲ။ .Leg လက်=ခြေထောက်
အဲဒါလည်း မှန်ပ့ါ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2714
ကထူးဆန်း says: တကယ်တော့အားလုံးညာ နေတာပါဘဲ … လွှတ်တော် ထဲ မှာ ပြောတာပါ ..
Ma Ma says: ကထူးဆန်းကိုတော့ ပုဏ္ဏားဘွဲ့ပေးရတော့မယ်။
အမှန်တော့လည်း အခုအတွေးက ခေါင်းပေါင်းစတွေ ညာချဆိုတာကနေ ရလာတာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12168
Alinsett @ Maung Thura says: ဘာသာစကားနဲ့ ပတ်သက်ရင်..အဲဒီလိုတွေ ထိုင် တွေးပြီး…တွေးမိတာကို ရေးပြနိုင်တဲ့သူတွေ အများကြီးလိုတယ်ထင့်…..
Ma Ma says: ဖတ်ရှု့အားပေးတာပဲ ကျေးဇူးတင်ရသေးတာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5027
Mr. MarGa says: ထိုင်စဉ်းစားတာ
Ma Ma says: ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်သိကြားမင်းကို ဆံပင်ဖြူစေချင်တာ မဟုတ်ရပါဘူးနော်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1374
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဟိုက် ရှားပါးစ် အန်တီမမ ဥာဏ်ကောင်းလှပါကလား။
Ma Ma says: တခါတလေ ဘာမှန်းမသိပဲ အဲလိုကပေါက်တိကပေါက်ချာတွေ စိတ်ထဲရောက်လာတတ်တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2394
Ma Ma says: မအေးလို တရားနဲ့ မတွေးတတ်သေးလို့ အတွေးတွေ ပေ ရှည်နေတာ။
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: အဲ့ဒါ .. အဲ့ဒါ ..
Ma Ma says: ရှာဖွေလေ တွေ့ရှိလေ ကဏ္ဍပေ့ါ မဟာရာဇာကြီးရေ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: ရှာဖွေလေ
Ma Ma says: ( တိုက်ဆိုင်မှ
ကွန်မန့်ကိုဖတ်ပြီး ဟုတ်သားဟ လို့ အာလုပ်သံကြီးနဲ့ အော်သံကိုတောင် ကြားမိတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9265
ဦးကြောင်ကြီး says: မားမားတူမ ကြောင်နှဲ့ယ
Ma Ma says: ကြောင်ကြီးလုပ်ပုံနဲ့တော့ ဆွေခန်းမျိုးခန်းတွေလည်း ပြတ်ကုန်တော့မှာပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: ဂျပန်​​ခေတ်​က စစ်​သင်​တန်း​မောင်း​တော့ ဘယ်​ညာ ဘယ်​ညာ လို့ ​မောင်းရင်​မှားကြသတဲ့ ။ အဲ့​တော့ ဘယ်​ဘက်​​ခြေ​ထောက်​မှာ ​ကောက်​ရိုး ချည်​​ပေးထား ညာက်​​ခြေ​ထောက်​မှာ မြက်​ပင်​​ချည်​​ပေးထားပြီး ” ​ကောက်​ရိုး ​ခြေ​ထောက်​ မြက်​​ခြေ​ထောက်​လို့ သင်​တန်းဆရာက ​ခေါ်​ပေးပြီး သင်​တန်း​မောင်းရသတဲ့ ။ မှီလိုက်​တဲ့ သူ​တွေ ပြန်​​ပြောပြတာ မှတ်​မိ​သေးတယ်​ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ကောက်ရိုးခြေထောက် မြက်ခြေထောက် ဆိုတာလည်း ကြားဖူးတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3924
weiwei says: အခုတလော ဆံပင်ဖြူ စတွေ့ပြီးကထဲက စဉ်းစားခန်းတွေကို ရပ်ထားပြီး သူများစဉ်းစားပြီးသားကိုပဲ အဆင်သင့်ယူတတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတာကြာပြီဆိုတော့ ..
မစဉ်းစားတော့ပါဘူး .. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ဝေေ၀ ရွာထဲက ပျောက်နေသလားလို့။
ဆံပင်ကတော့ တခေါင်းလုံးဖြူနေပြီမို့ ထူးပြီးမဆန်းတော့လို့ ဂရုကို မစိုက်ဖြစ်တော့ဘူး။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1608
ကြောင်ဝတုတ် says: စံဇာနည်ဘိုပြောဖူးတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းသွားသတိရတယ်ဗျ…
ခင်ဇော် says: ရုံး မှာ ဆို စကားပြောဖြစ်ရင် By right, ……………….
Ma Ma says: (Right Hand လို့ခေါ်တယ်…
မကြားဖူးတဲ့ ဗဟုသုတမို့ မှတ်သွားပါတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: By right ကတော့ ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့်မို့ စဉ်းစားတာဖြစ်မယ်။
By left ကိုတော့ မစဉ်းစားတဲ့အထဲ ထည့်ထားတယ်ပေ့ါ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: အောင်းမြလေး
Ma Ma says: သူတို့လည်း ညာလက်ကို ထမင်းစားတဲ့ပါးစပ်ပေါက်နဲ့ တွဲမှတ်တယ်ဆိုတော့ မြန်မာလိုနဲ့ အတူတူပဲပေ့ါ။ 左　- hidari (Left) ကို တရုတ်လို zuo